I-Dimexide ebusweni: indlela yokusebenzisa i-dimexide yokuvuselela ubuso, i-dimexid kunye ne-solelerol ye-gel anti-wrinkle
I-Dimexide ebusweni: i-cosmetology yezoqoqosho
Ngokungabikho kolondolozo kunye nokunyanzela, utshintsho oluneenkqubela zokuqala luyakubonakala elukhumbeni - obunzima, obomileyo, ukulahleka kwe-turgor, imibimbi. Zonke ezi zingapheliyo zokungcola zingonakalisa kakhulu imvakalelo yowesifazane, engeza iminyaka kwiminyaka yakhe yangempela. Xa kubonakala imibimbi okanye i-nasolabial folds, abo abangafuni ukuguga baxhamla kwi-beautician ngeenjini zeBotox. Kulabo abaye banqanda kwiimilinganiselo ezinzulu, i-cosmetology yanamhlanje inokunika imaski kunye ne-dimexide kunye ne-solcoseryl.
Yintoni esetyenziselwa endaweni ye-botox?
I-Botox inefuthe elincinci elincinci kwiimpawu zomzimba, nangethuba lezenzo zexabiso, ngelixa izihlunu zingabaluleki isikhumba ngelixa lihamba, liyakwazi ukuhlaziywa, okubangele ukuba imibimbi ihlanjululwe. Nangona kunjalo, emva kweejoyi zeBotox, ubungqina bomzimba bunokuchaphazeleka, okwenza kube lula kunye "nopopi", kodwa ukulahleka kwezinto kulahlekile. Ngako oko, ukuhlaziya ulusu kunye nemibonakalo yokuqala kunye nempawu zokubilisa, sebenzisa iindlela ezintle - iimaski ezivela kwi-starch, ukhilimu kunye ne-peptide yenyoka, iimaski ezine-dimexide kunye ne-solcoseryl.
Jongana nomaski kwi-dimexide kunye ne-solcoseryl
Le maski iyathandwa kwi-cosmetology yanamhlanje. Ukuqala, ukucoca i-pharmacy dimexide kumanzi afudumele abilisiwe, ukugcina inani elingu-1:10, kwicandelo elincinci alinconywayo ukuba lingabangeli ukuphazamiseka komzimba kunye nokucaphuka. Isisombululo sisasazwa ebusweni nge-discon disc kwaye emva kwemizuzwana embalwa, emva kokuba yomile, i-solcoseryl isetyenziswa ngendlela ye-gel.
Nangona i-dimexid iphakamisa ukungena kwezithako ezisebenzayo kunye ne-solcoseryl, ukwenzela ukuba iziphumo ezibonakalayo kuyimfuneko ukumelana ne-mask ebusweni ukusuka kwiminithi engama-40 ukuya kwiyure, ukuyihlaziya rhoqo ngamanzi kwi-atomizer ukwenzela ukuba kube lula ukususa ekupheleni kwenkqubo. Emva kweemaski, ukhilimu onondla uhanjiswa esikhumbeni kwaye ushiye ukuba wenze iiyure eziliqela. I-Solcoseryl ingasetyenziselwa kuphela ukuhlaziya isikhumba ebusweni, kodwa nokunciphisa isikhumba kwindawo yonyawo, ukuphulukiswa kwee-microcracks kunye nengqolowa.
I-Dimexide kwi-cosmetology ebusweni
I-Dimexide (okanye i-dimethylsulfoxide) liyinxalenye yeemveliso ezininzi zezonyango, apho zisetyenziselwa njenge-antiseptic ne-anti-inflammatory agent. Ukongeza, i-dimexide inekhono lokuqhuba ezinye izithako ezisebenzayo phakathi kweeseli, ngokwandisa umphumo wazo. Ngendlela yayo ecocekileyo, i-dimexide ingathengwa kwi-pharmacy, kodwa ingasetyenziselwa kuphela ukuhlanjululwa, ngaphandle koko kukho umngcipheko wokubangela ukuphendulwa komzimba. Ngokudibanisa ne-solcoseryl, i-dimexide ikhuthaza ukuhlaziywa kwezicubu zesikhumba, iphakamisa i-microcirculation kunye ne-breathing tissu. Ukongezelela, i-dimexide isinconywa ukuba silwe ne-acne kunye ne-rashes-isetyenziswe nge-cotton swab kwiindawo ezichaphazelekayo ukukhupha ukutshaya, kunye nokudibanisa namanye amacandelo kwi-mask - i-oil tree tree, udongwe omhlophe, i-vitamin E. Emva kokufaka i-dimexide ebusweni Abaninzi abafazi baqaphele umphumo wokuhlaziywa - ulusu luba lukhulu ngakumbi kwaye luqiniswe, imibimbi iyanyamalala, ubude buba nzima kwaye buphilile. Ngexesha elifanayo, iziphumo zenkqubo zibonakala kulabo abakujikelezile - abahlobo, abahlobo kunye nosapho, umphumo we-mask kunye ne-dimexide iyafana nokuphumla okuhle emoyeni omtsha. I-Solcoseryl inconywa ukuba isetyenziswe njenge gel yesikhumba esinamafutha kunye ne-cream okwomileyo, i-solcoseryl amafutha ayilungelekanga ukusebenzisa iinkqubo ze-cosmetology zasekhaya, njengoko isasazeka ngaphezu kobuso kwaye zingonakalisa izinto.
Otoplasty: ukucwangcisa ubuchule, iindlela zokuqhuba
I-sav soap kwi-acne
Iifayile ziphuma phantsi? Ukuqiniswa kweeyelashes!
Iipropati ezifanelekileyo zonxweme
Ukucoceka ukutya ngokuncedisa ukutya okutya
Ubuso bokuguga obusakhulayo
Kuliphi ilizwe elithengileyo kakhulu
Iidrafti ezivela kwiklabishi ebusika kunye ne-aspirin, ngaphandle kweviniga, ngaphandle kobuncwane. I-hodgepodge enhle kakhulu neklabishi - iresiphi ngesithombe
I-regimen yosuku kunye nokutya komntwana kunyaka o-1. Ukuphuhliswa komntwana oneminyaka elilodwa
Izenzo zomzimba eziwusizo zomzimba
Indlela yokukhulisa i-avocado kwithambo elisekhaya
Yintoni ofuna ukuyazi malunga ne-anesthesia?
Ukulahleka kokunciphisa umzimba: imfihlelo yentsana yokugaya
Isitratato sichaza kuthi: iimfihlelo zowesifazane wesimo
Indlela yokwenza imali ngethuba lokushiya umama
Ikhekhe le-carrot 2
Indlela yokuphilisa ukuhamba kwekhaya
Ikhekhe lomgquba kunye neeperesi